Ahoana ny fomba hahitana ny WordPress tsara indrindra ho an'ny tranonkala
WordPress, iray amin'ireo tranonkala fifaneraserana amin'ny aterineto malaza indrindra manerantany, no mpanamboatra tranonkala an'arivony, na kely na lehibe. Raha manapa-kevitra ny handeha amin'ny làlan'ny WordPress ianao, na mampiasa tranokala mahazatra na orinasa fampiantranoana WordPress ianao, dia mila mandinika antony roa:
Alao sary an-tsaina hoe manana kafe tsy misy glomposinao ianao any Boston. Raha misy mitady hividy "café tsy misy gliavy" eo akaikin'i Google, dia azo antoka fa tianao ho tadiavina ny tranonkalanao WordPress eo an-tampon'ny valin'ny fikarohana, sa tsy izany? Izany fomba izany, ireo olona izay ...
Ahoana ny fametrahana Google Analytics ho an'ny WordPress
Efa nanontany tena ve ianao hoe inona marina no ataon'ny olona rehefa miditra ao amin'ny tranonkalanao WordPress? Efa nieritreritra ny tranonkala vohikala izay tiany hijanona ela indrindra, inona ny fampielezan-dry zareo mitondra azy ireo, ary iza amin'ireo tranonkala vohikala no mitsinjo ny tsara indrindra? Google Analytics dia afaka manampy anao ...
Ahoana ny fametrahana WordPress: The Methods 4
WordPress dia fantatra amin'ny maha-iray amin'ireo safidy rindrambaiko fitantanana tranonkala (CMS) malaza indrindra hatramin'izao. Ny iray amin'ireo antony lehibe indrindra dia satria ny WordPress dia mora ampiasaina ary mahafeno ny filan'ny karazana tranokala sy raharaham-barotra. ...
WordPress.org vs WordPress.com: Inona ny fahasamihafana?
Taona maro isan-taona, WordPress dia laharana voalohany amin'ny fitaovana fananganana tranokala avo indrindra. Ity rindrambaiko mora ampiasaina amin'ny CMS (rafitra fitanana an-tserasera) ity dia manomboka amin'ny namana, manolotra drafitra isan-karazany, ary mamela anao hanangana haingana sy hikaroka tranokala miavaka sy miasa ho an'ireo mpitsidika anao. Raha toa ianao ka ...
The 15 Best WordPress Themes WordPress Themes for 2019
WooCommerce dia malalaka, tranonkala e-commerce open-source natsangana ho an'ny vohikala WordPress. Ny plugin dia ahafahanao mivarotra mora foana ny karazan-tsakafo rehetra amin'ny fotoana rehetra hanomezana ny mpitsidika anao ny traikefa hividianana zavatra tsy misy dikany sy tsy nahitam-bokatra. Azonao atao ny mamorona ny traikefan'ny fividiananao an-tsena amin'ny alalan'ny fampiasana ny iray amin'ny ...
Ny vulnerabilities dia hita vao haingana tao amin'ny AMP malaza amin'ny WP plugin izay mamela ny mpampiasa rehetra voasoratra hanatanteraka hetsika fitantanana amin'ny tranokalan'ny WordPress. Efa hita ankehitriny fa misy fanafihana XSS mavitrika izay mikendry ireo vulnerabilities mitovy amin'ny fametrahana ny backdoors ary mamorona ...
Ahoana ny fomba fitsapana test A / B amin'ny WordPress amin'ny fampiasana Google Optimize
Tianao ve ny handefa fitsapana A / B amin'ny tranokala WordPress hanatsarana ny fifampiresahana? Ny fitsapana fohy dia manampy anao hahatakatra ny fiovana madinidinika amin'ny votoatiny sy ny endriny. Amin'ity lahatsoratra ity dia hasehontsika anao ny fomba atao mba ahafahana manatsara ny fisedrana A / B amin'ny WordPress ...
6 Best Plugins ho an'ny WordPress ho fiarovana ny tranonkalanao (ampitahaina)
Vao haingana ny iray amin'ireo mpamaky no nanontany anay hoe inona ny Plugin fiarovana WordPress? Mampiasa plugin fiarovana WordPress miaro ny tranokalanao WordPress amin'ny malware, ny herisetra amin'ny herisetra, ary ny fanandramana hacking. Anatin'ity lahatsoratra ity, nizara ny tsara indrindra WordPress security plugins izay azonao ampiasaina amin'ny ...
Ahoana ny fomba mora miala ny tranonkalanao avy amin'ny Joomla amin'ny WordPress (dingana isan-tsokajiny)
Te-hanosika ny tranokalanao amin'ny Joomla amin'ny WordPress ve ianao? Na dia fitaovana fitantanana tsara amin'ny tranonkala aza i Joomla, TSY ho mahery fo, mahay, ary mpampiasa ianao amin'ny WordPress. Matetika ny mpampiasa dia afaka manomboka amin'ny Joomla, saingy amin'ny farany izy ireo dia miditra amin'ny WordPress. Ao amin'ity lahatsoratra ity, dia ...
12 Analytics Plugins ho an'ny WordPress
Amin'ny alalàn'ny plugin marina analytics, ny mpivarotra Ecommerce WordPress dia afaka mahazo ny angona betsaka mba hanarahana ny mpitsidika sy hahita izay tiany sy izay tsy ataon'izy ireo, hanova ny mpitsidika maro kokoa. Ity ny lisitry ny plugins analytics ho an'ny WordPress. Misy vahaolana hanaraha-maso ireo mpitsidika, mamorona pejy ...
Famelabelarana Thèmes Review - Moa ve ny WordPress tsara indrindra?
Raha manontany ahy momba ny foto-kevitry ny Thrives aho ary nahoana aho no niova avy tamin'ny Genesisy, aloha aho tokony hanontany tena hoe ohatrinona ny fitiavanao ny tranoko vaovao? Ho an'ireo izay mampiasa ny Thrive Themes, azoko antoka fa mpankafy lehibe ianao satria ...
Ahoana ny fametrahana WordPress hampiasana Database Remote
WordPress no sehatra fitantanana ankapobeny indrindra (CMS) mifototra amin'ny PHP sy MySQL. Rehefa mitombo ny fitomboan'ny WordPress CMS ao amin'ny fifamoivoizana ary efa nihoatra ny loharanom-piraketan'ny loharano misy anao ianao, ny vahaolana matihanina dia ny manolotra ny rakitrao amin'ny sehatr'ilay database. Miaraka amin'io vahaolana io, ianao ...
11 WordPress Plugins ho an'ny Customer Support
Ny fanomezana fanohanana amin'ny traikefa amin'ny mpanjifanao dia fomba tsara ahafahana miantoka ny fiverenany. Raha manana tranonkala WordPress ianao dia misy karazana fanohanana mpanjifa manampy ny. Ity ny lisitry ny plugins amin'ny fanohanan'ny mpanjifa amin'ny WordPress. Misy plugins manome ...
Fixing WordPress: 'Tsy mety vetivety amin'ny fikojakojana voalamina. Miverena amin'ny hadisoana iray minitra
Dia nihazakazaka tamin'ity olana ity aho. Na inona na inona nataoko dia ny solosaina WordPress dia naneho ny hadisoana iray tsy misy dikany izay novakiako toy izao: Tsy misy fotoana fohy ho an'ny fikojakojana voatazona. Miverena ao anatin'ny iray minitra. Fig.01: Ahoana ny fomba famahana ny fandefasana mora vidy ho an'ny fikojakojana voalamina ao amin'ny WordPress Here is ...
24 Best WordPress Resadresaka ho an'ny CV Online (2017)
Mitady CV na Word Resume ho an'ny WordPress ianao? Ny fanorenana resadresaka an-tserasera amin'ny CV anao dia afaka manampy anao hanangana marika manokana, hahita asa, ary hanao fifandraisana vaovao. WordPress dia sehatra tsara indrindra hanorenana ny fanatrehanao amin'ny aterineto. Ao amin'ity lahatsoratra ity, isika ...
Ahoana no hamoronana pejy lehibe feno amin'ny WordPress
Te-hamorona pejy malalaka amin'ny WordPress ve ianao? Betsaka ny WordPress maro no efa tonga miaraka amina tranokala feno tranokala feno izay ahafahanao mampiasa. Na izany aza, misy lohahevitra sasantsasany tsy manana izany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampiseho anao ny fomba hamoronana mora foana ianao.
Ahoana ny fandefasana adiresy DFP amin'ny WordPress
Ny DFP dia midika hoe DoubleClick for Publishers ary ny dikan'ny anarana dia ampiasain'ny mpizara isan-karazany ho mpizara adiresy adiresy izany na afaka manome tombontsoa betsaka amin'ny fitantanana ny fivarotana varotra amin'ny anaran'ny orinasa. Adi-pandaharana malaza marobe toy ny AdSense ...
Top 5 Plugins WordPress ho an'ny SEO
Iray amin'ireo tombontsoa goavana indrindra amin'ny fampiasana WordPress ho CMS dia misy maro ireo plugins maimaim-poana azo ampiasaina ho an'ny WordPress izay hikolokolo tanteraka sy hanamafisana ny SEO amin'ny tranonkala. Rehefa mikaroka plugins mba hampiroboroboana ny SEO ianao dia mety ho ...
WordPress dia manomboka mamorona automatique nopieerre noopener automatique
Voamarikao ve fa ny tags nohavaozina noreferrer dia ampidirina amin'ny rohy external AND ANDRO anatiny izay misokatra ho an'ny tablette vaovao (target_blank) ao amin'ny WordPress blogo? Voamariko fa nitranga tao amin'ny blaogiko iny alina iny. Nanafoana WordPress plugins aho, nanova ny ...
1 2 3 4 ... 14 Manaraka
windows update Unité centrale tahirin-kevitra hametraka Ubuntu 16 Cortana PHP USB Windows "PC Time Linux Ubuntu Systems Server Performance 04 Microsoft Malagasy Bible Up " Windows Phone 10 Samsung Galaxy Plugin GNOME loharano misokatra Windows 8 paoma Ubuntu Microsoft Windows Linux Unix Nginx bilaogy Firefox Chrome Linux Mint Android Plugins CentOS MAMAKA Command vaovao farany Toetoetra PDG Company Twitter taona 'App HTTP fitaovana SSH finday avo lenta YouTube SEO CentOS 7 web browser takelaka fikirakirana MySQL OS X PPA lalao endri-javatra Ubuntu 14.10 ubuntu 15.04 fitaovana WordPress Screen ram nbsp afa-po famotsorana fitaovana finday Database Phone HTML Ubuntu 14.04 Video File IP adiresy Fitaovana finday fanamarinana Bing Apple Watch fitaovana Google API lalao app store toe-tsaina Apps HTTPS Apache Users fikarohana iPhone One ' Support web server bilaogy Debian Samsung fifamoivoizana command line SSD famerenana haino aman-jery sosialy rafitra Rafitra fikirakirana rindrambaiko raki-daza Facebook Windows 10